Al Baghdadi iyo Bin Laden: Maxaad ka ogtahay eeygii loo adeegsaday dilkooda? - BBC News Somali
Al Baghdadi iyo Bin Laden: Maxaad ka ogtahay eeygii loo adeegsaday dilkooda?
Xigashada Sawirka, Sfgate
Eeyadan noocan oo kale ah ayaa qiimo badan ka jooga caalamka
Waxaa maalma kahor la dilay hogaamiyihii kooxda ISIS, Abubakr Al Baghdadi oo ay ciidamada Mareykanka ku weerareen deegaan ku yaala waqooyiga dalka Suuriya.
"Wuxuu tegay halkii ugu dambeesay ee godka, waxaana eryanayay eeyga, wuxuu qaraxiyay jaakadii uu xirnaa, waxaana halkaas sidoo kale ku dhintay saddexdii caruur iyo isaga, jirkiisa waxaa gogooyay qaraxa," ayuu yiri Trump oo fahfaahinayay qaabkii uu u dhintay Al Baqdaadi.
Xigashada Sawirka, New York Times
Eeyadan noocan oo kale ah ayaa waxaa loo adeegsadaa hawlgalada ammaanka
"Haddii ay ciidanka Mareykanka qaadayaan hawlgal, waxay u baahan yihiin eey urin kara qaraxyada, sidoo kalena wax iska dhicin kara." Ayuu yiri Mr Aiello.
Donald Trump ayaa ka hadlay eeyga loo adeegsaday howlgalka wuxuuna sheegay in yy qabtay "shaqo culus oo ah qabashada iyo dilka hoggamiyaha Abu Bakar Al Baqdaadi".
Xigashada Sawirka, The Sun
Eeyga loo yaqaano Cairo
Eeydan ayuu Mr Aiello sheegay in marka si wanaagsan loo tababaro ay ban'iaadamka kaga wanaagsan yihiin xagga ammaanka ee urinta walxa qarxa iyo qalabka casriga ah ee loo farsameeyo in ay ogaadaan qaraxyada iyo waxyaabaha amni darrida keeni kara.
"Anagu ma sameyn karno waxa eeydaas ay sameynayaan", ayuu yiri Aiello, oo 1966-dii qeyb ka ahaa askar Amerikaan ah oo la geeyay dalka Vietnam, kuwaas oo watay eeyda dagaalka.
Waxaa kale oo uu sheegay in eeydan ay sidoo kale u tababaran yihiin in ay badbaadiyaan nafsadda qofka ban'aadamka.